Tag: kutengesa gamification | Martech Zone
Tag: kutengesa gamification
Kuita kwekutengesa kwakakosha kune chero bhizinesi riri kukura. Neboka rekutengesa rakabatanidzwa, vanonzwa vachikurudzirwa uye vakabatana nezvinangwa zvesangano nezvinangwa. Izvo zvakashata zvinokanganisa zvevashandisi vasina basa pasangano zvinogona kuve zvakakosha - sekushomeka kwekugadzira, uye kutambisa tarenda uye zviwanikwa. Kana zvasvika kune timu yekutengesa zvakanyanya, kushomeka kwekuita kunogona kudhura mabhizinesi akananga mari. Mabhizinesi anofanirwa kutsvaga nzira dzekushingairira kutengesa zvikwata, kana njodzi